Kufamba kuenda kuCook Islands | Kufamba Nhau
Kufamba kuenda kuCook Islands
Mariela Carril | | Inotungamirira, Islands
Zvitsuwa zvakanaka zvakadii zviripo munyika! Kunyanya mu Maodzanyemba ePacific, iyo nyika yenyaya zhinji dzeJack London nyaya dzandakaverenga ndichiri mudiki. Pano, muchikamu chino chenyika, mune, semuenzaniso, iyo Cook Islands.
Iboka diki rezviwi pedyo neNew Zealand yemagreen uye turquoise nharaunda, inodziya mvura uye tsika dzePolynesia. Isu takavawana here?
2 Tourism mu Cook Islands
Sezvatakataura, iri zvitsuwa zvezvitsuwa gumi nezvishanu inovhara nzvimbo yakazara ye240 square kilometres. Iwo Cook Islands dzakabatana neNew Zealand, nyika ino inobata nedziviriro yayo nenyaya dzepasirese, kunyangwe kwenguva yakati rebei vava kuzvimiririra. Nhandare yendege yepasi rose uye huwandu hwevanhu vari pachitsuwa cheRarotonga uye zvitsuwa zvinorarama kuburitsa michero, offshore banking, kurima maparera nekushanya.
Ivo vanonzi Cook mushure meBritish navigator, anozivikanwa James Cook, uyo akatanga kusvika muna 1773, kunyangwe zita iri rakapihwa iye muzana rakatevera. Vagari vekutanga vaive VaPolynesia vanobva kuTahiti Asi zvakatora maEuropean zvishoma kuti vasvike vagare nekuti vazhinji vakaurayiwa nevagari vemo. Yakanga isiri iyo kusvika 20s yezana ramakore rechiXNUMX apo vamwe maKristu vakave nerombo rakanaka, kunyangwe mukati mezana iro ramakore zviwi zvakava a kumira kwakakurumbira kwevanomhara whalers sezvo vakapihwa mvura, chikafu nehuni.
Muna 1888 maBritish akavashandura kuva a kudzivirira, pamberi pekutya kuti France yaizovatora sezvo yaive yatove muTahiti. Pakazosvika 1900 zviwi zvakaunganidzwa neBritain Humambo, sekuwedzera kwemakoroni eNew Zealand. Mushure meHondo yechipiri, muna 1949, vagari veBritain veCook Islands vakava vagari veNew Zealand.
Iwo Cook Islands ari muSouth Pacific Ocean, pakati peAmerican Samoa neFrench Polynesia. Iyo yakanaka saiti! Ivo vakakamurwa mumapoka akasiyana, izvo zvekumaodzanyemba, izvo zvekuchamhembe nemakorari atoll. Ivo vakaumbwa nebasa rekuputika uye zviwi zvekuchamhembe ndiro boka rekaresa. Mamiriro ekunze anopisa uye kubva munaKurume kusvika Zvita vari munzira yedutu.
Chokwadi ndechekuti ivo zviwi zviri kure nezvose uye izvo zvinotyisidzira hupfumi hwavo sezvo vachivimba zvakanyanya nekunze. Pamusoro pezvo, mamiriro ekunze haabatsire kana nekuti vari pasi pemamiriro ekunze akawanda. Sezvo '90s zvinhu zvave nani zvishoma nekuti zvava tax tax.
Tourism mu Cook Islands
Unosvika kuzvitsuwa nendege Mhepo Nyowani Zeland, Mhandara Australia kana Jetstar. Kune ndege dzakawanda kubva kuAuckland uye kubva kuAustralia kuburikidza neguta reNew Zealand. Iwe unogona zvakare kusvika kubva kuLos Angeles kana kubva kune mamwe maguta anoshandirwa nendege yeNew Zealand. Ipapo, kubva kuchitsuwa kuenda kuchitsuwa iwe unogona kutora zvikepe kana ndege kuburikidza Mhepo Rarotonga.
Chitsuwa chine nhandare yenyika dzepasi rose ndiyo mukova weKuki: Rarotonga Island. Inongova makiromita makumi matatu nemaviri mukutenderera uye inogona kufamba nekukurumidza mumaminitsi makumi mana nemotokari. Kunyangwe zvakadaro, ine nzvimbo dzakanaka uye dzakasiyana uye inotarisisa huwandu hwakanaka hwemaresitorendi, pekugara uye zviitiko.
Chimwe chitsuwa chakanaka chiri Aitutaki, el Denga pasi pano. Inongova maminetsi makumi mashanu kubva kuRarotonga, yakaumbwa sekatatu uye ikorari reef ine yemukati turquoise lagoon yakazara nezvidiki zviwi. Ichi ndicho chitsuwa chechipiri chinoshanyirwa zvikuru nevapiki uye chinowanzoitika honeymoon kuenda.
Unogona kuenda kayaking, sunbathe pane akanaka machena jecha mahombekombe, kitesurf, enda kunobata hove, snorkel uye kudhiza, kukwira sikuta kana bhasikoro kana kugara wakananga pano uye uine zvese padyo padyo kwenguva yakareba.
Atiu chiri chitsuwa chine makore anodarika mamiriyoni masere ekuberekwa. Ndiyo jungle uye tropical chitsuwa hafu kukura kweRarotonga. Heino zvakasikwa, kwete budiriro. Ingori maresitorendi mumisha yayo mishanu iri pakati. Organic kofi inorimwa uye kune super yakaradzikwa kumashure vibe.
Unoenda sei ikoko? Pakufamba kwemaminetsi makumi mashanu nemashanu kubva kuRarotonga kana Aitutaki. Kubva pachitsuwa chekutanga pane nendege nhatu pavhiki, Mugovera, Muvhuro neChitatu. Kubva wechipiri kune nendege nhatu asi nemusi weChishanu, Muvhuro neChitatu kuburikidza neAir Rarotonga.
Mangaia Icho chitsuwa chinofanirwa kuve nemamiriyoni gumi nemasere emakore, saka ndicho chitsuwa chekaresa muPacific. Ndicho chechipiri pakukura Cook Island uye inongova maminetsi makumi mana kubva kuRarotonga. Izvo zvekunaka kukuru kwechisikigo, ine mafossalized coral mawere, zvinomera zvakasvibirira, mahombekombe ane mvura yakajeka sekristaro, mapako anonakidza, kunyura kwezuva kwakanaka, zvisaririra zvekuparara kwechikepe muna 1904 nemisika yemuno ine mavara.
La Mauke chitsuwa, "Panogara moyo wangu," ndi gadheni chitsuwa uko maruva nemichero yakawanda. Pano iwe unofanirwa kushanyira Marine Cave kumahombekombe ekumabvazuva, kuburikidza nematenga ayo iro zuva rinosefa uye rinopa kupenya kwebhuruu kumvura. Izvo zvinongowanikwa chete pakadzika mafungu. Kune zvekare zvisaririra zvechikepe chakaparara, iyo Te Kou Maru, chikepe chakanyura muna 2010.
La Mitiaro chitsuwa chitsuwa chakanaka uye chakasarudzika, nemadziva echisikigo nemapako pasi pevhus. Pane imwe nguva chitsuwa chidiki ichi chaive gomo rinoputika asi rakanyura mugungwa ndokuva a coral atoll. Iyi geological fomati yakapa iyo yakanaka uye yakanaka zororo yekuongorora. Inogarwa nevanhu mazana maviri, inodziya, iwe unosvika nendege uye kazhinji unogona kuhaya pasuru yekugara uye mafambiro.
Izvi ndizvo zviwi zvinozivikanwa zveCook Islands, asi zvirokwazvo zviripo zvimwe zviwi: Rakahanga, Manihiki, Pukapuka, Palmerston, Penrhyn, Takutea, Nassau, Suwarrow, Manuae... ndidzo mafoni zvitsuwa zvekunze, inokwezva, mhuka uye kure uye isina kusvibiswa. Kune zviwi zvisere zvakazara, zvinomwe mukati meboka rekumaodzanyemba uye zvinomwe zviri kuchamhembe. Kune ndege dzemuno dzinosvika pane dzimwe uye dzimwe ngarava dzinosvika.
Iwo ari mashoma zviwi zviwi saka kana iwe uchida kunzwa zvakanaka kure neboka rinopenga iwe unofanirwa kusvika pano, kuSouth Pacific Ocean iri kure. Pakupedzisira, iyo pekugara muCook IslandsZvekushanya, zvakasiyana uye mazhinji ari pamucheto wemvura. Pane zororo, dzimba dzakanaka, mahotera, imba yekurendesa. Unogona kufamba semhuri, kudzimba dzine makicheni nezvose, kana sevanhu vaviri kunzvimbo dzinoyevedza dzekuzorora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Islands » Kufamba kuenda kuCook Islands
7 manomano ekufamba kwemotokari munguva yechando